Maitiro ekuisa Gimp 2.10 paGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memakore akati wandei ebudiriro, vhezheni itsva yeGimp, Gimp 2.10, yakaburitswa mazuva mashoma apfuura. Iyo vhezheni inouya nekuvandudza kukuru uye nezvinhu izvo vashandisi vazhinji vaida uye zvinotarisirwa kwenguva yakareba.
The users of rolling kuburitswa kwekuparadzira vanogona kunge vaine iyi vhezheni itsva pamakomputa avoAsi chii icho avo vasingashandisi rolling kuburitswa kwekuparadzira vanoita? Tevere isu ticha tsanangura nzira dzakasiyana dzekuisa Gimp 2.10 muzvikamu zvakasiyana zvinotsigira zvinyorwa, AppImage mapakeji uye flatpak mapakeji.Nzira iri nyore yekuisa Gimp 2.10 ndeye kuburikidza neAppImage package. Tinogona kuvaka iyi Gimp package nekuda ino Github repository. Mune ino yekuchengetera isu tichawana iwo mirairo yekuvaka iyo package muAppImage fomati.
Kana isu tine mugove unobva paUbuntu kana Debian, tinogona shandisa ppa zvinyorwa, mamwe ekuchengetera ekunze kune iyo kugovera iyo inotibatsira isu kuisa yazvino vhezheni yeGimp. Kuti tiite izvi tinovhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ino yekuchengetera haisi yepamutemo uye nekudaro inogona kuunza mamwe matambudziko nemamwe mapurogiramu isu atakaisa.
Sarudzo yechitatu ye kuisa Gimp 2.10 iri kuburikidza neplatpak package. Rudzi rwepakeji runotsigirwa nezvakawanda zvisina-kubhururuka zvekuburitsa sekugovera seFedora, OpenSUSE kana Ubuntu. Kuisa nemhando iyi yemafomati, tinogona kuenda ku Flathub uye gadza kuburikidza newebhu browser kana vhura terminal uye nyora zvinotevera:
Sarudzo yekupedzisira kurodha pasi pasuru zvakananga kubva iyo yepamutemo Gimp webhusaiti. Patinodhawunirodha pasuru Ichave iri tar.gz fomati, isu tinosunungura iyo uye tobva tamhanya iyo application inonzi "gimp". Iyi sarudzo ndeimwe yeakareruka asiwo iyo ine yakanyanya kubatana neyakagovaniswa.
Chero zvazvingaitika, kuburikidza neimwe yeidzi nzira tinokwanisa kuisa yazvino vhezheni yeGimp uye edza iyi yemahara imwe nzira kune Photoshop.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuisa Gimp 2.10 paGnu / Linux
Izvo iwe zvaunoisa ndeye 2.8 uye iyo yekuvandudza haina kushanda. Chero zano rekuti ini ndinogona kusimudzira sei?
Chokwadi, iyo iri mumahofisi epamutemo yakaiswa, uye iri 2.8
Ini handizive chii chichafanirwa kuitwa kumisikidza iyo nyowani vhezheni.
Iwe urikuda kuedza kuisa Gimp 2.10 pane Unbuntu 16.04, chinova chinhu chine musoro kuita nhasi.
Nekudaro, zvinoita sekunge Joaquin akanganwa kutarisa repository nekuti, dai akadaro, angadai akaona kuti 2.10 inongowanikwa kuUbuntu 18.04 uye 17.10.
Ini ndinofungidzira kuti muUbuntu 16.04 ichakwanisa kuiswa neFlatpak package asi ini handina kuyedza uye handigone kuve nechokwadi. Uye zvakare, ipapo isu tichafanirwa kuona kana ichishandurwa, kana ichigona kuwana zvikamu zvakagadzwa, nezvimwe, uyai, zvinowanzoitika matambudziko (kunyange zvisingawanzoitika mune zvese zviitiko) zvemapakeji mafomu matsva senge snap kana flatpak.
Zvingave zvakanaka kana Joaquín akavandudza chinyorwa ichi kujekesa izvi.
Zvino, zvirinani kwandiri, haasati ambondipindura uye handisi anovenga chaizvo.
Ndiri kuda vhezheni 2.10, asi inongondipa 2.8 uye ne flatpak inondiudza kuti inoisa vhezheni 2.10 asi kana ndichivhura ndinongowana 2.8.
rolling kuburitsa kugovera kunotsigirawo zvese snap uye flatpak.
Mune yazvino vhezheni yeLinux Mint, chete vhezheni 2.10.18-1 inowanikwa izvozvi.
Mhoro. Izvo zvinoitikawo mune yepamutemo Ubuntu zvinyorwa. Kana iwe uchida yazvino vhezheni iwe unofanirwa kuwedzera unofficial repository kana kushandisa iyo Flatpak vhezheni. Ini ndaikurudzira iyo Flatpak, iyo inogadziridzwa zuva rimwe chetero.
Tsananguro yakanaka kwazvo yekuisa gimp, yakashanda zvakakwana. wazviita